Wednesday May 15, 2019 - 11:15:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar naf hurnimo oo shalay ka dhacay xarunta degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
sawir hore qarax ka dhacay Muqdisho
Weerarka oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis hure ah ayaa lagu beegsaday isku imaatin gudaha xarunta uga socday saraakiisha ammaanka Wardhiigleey.
Warbaahinta islaamiga ah ayaa heshay magacyada qaar kamid ah saraakiishii dhimashada iyo dhaawacyada kasoo gaareen qaraxii salay waxaana kami ahaa:-
Cali Aadan Warsam oo ahaa xogayaha degmada waxaa soo gaaray dhaawac halis ah
Nin magaciisa lagusoo koobay Cumar oo ahaa Agaasimaha guud ee Minishiibiyada degmada waxaa lagusoo waramaa in uu ku dhaawacmay weerarkii shalay.
Sidoo kale saraakisha ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay xarunta degmada Wardhiigleey waxaa kamid ah Taliye ku xigeenka Minishiibiyada Degmada.
Madaxa Caashuuraha degmada ahaana sarkaal katirsanaa BS-ta ayaa la xaqiijiyay in uu kamid ahaa saraakiishii ku dhintay qaraxii aadka u xooganaa ee shalay dhacay.
Cabdi Guure oo ahaa guddoomiye waaxeed ayaa kamid ahaa saraakiishii ku dhaawacantay qaraxii shalay, haweenay lagu magacaabo Dahabo Salaad oo kamid aheyd guddoomiye waaxeedyada degmada ayaa iyana dhaawacantay.
Dhimashada guddoomiye waaxeedyada maamulka degmada Wardhiigleey ayaa gaaraysa labo sida ay sheegeen saraakiil katirsan maamulka gobolka Banaadir waxaana badanaa dhaawacyada saraakiisha ladhigay isbitaalka Digfeer.